Christophe Colomb - Wikipedia
I Christophe Colomb (teraka anelanelan'ny 25 Aogositra sy ny 31 Oktobra 1451 tany Zena - Maty tamin'ny 20 Mey 1506, tany Valladolid, Espaina) dia olona voalohany indrindra tamin'ny Tantara niampita ny Ranomasimbe Atlantika amin'ny alalan'ny fahitana lalana vaovao mandeha-miverina anelanelan'ny kaontinanta Amerikana (noheveriny fa ny India) sy ny Eoropa. Nanao zotra efatra izy ohatra ny mpamily sambo, ary niasa ho an'ny Mpanjaka Katolika (Reyes Católicos, amin'ny fiteny espaniola) Isabel de Castilla sy Ferdinand de Aragón, nanome azy ny satan'ny Manjaka Faharoan'India ary ho lasa sefon'ny nosy sy tany ho hitany mandritry ny diany. Ny fahitana ny eran'ny Karaiba dia nanamarika ny fanjanatanian' Amerika. Io fahitam-baovao io dia manamarika ny fanombohan'ny Fotoana Moderna.
Ny mety ho sarin'i Christophe Colomb
Na dia milaza aza fa ny Viking no tonga tao Amerika voalohany tany amin'ny Terre-Neuve-et-Labrador, ary na dia efa nisy tanàna viking aza tany amin'ny faritra avaratry ny nosin'ny Tere-Neuve, I Colomb no tena lazaina fa « mpahitan' Amerika ».
1 Tantara Kolombiana
2.1 Fahazazana sy Fahatanorana
2.2 Asa tao amin'ny Fifamoivoizana an-dranomasina
2.3 Ny tetikasany : mandeha any India amin'ny alàlan'ny mankany andrefana
2.3.1 Ny dia voalohany
2.3.2 Ny dia faha roa
2.3.3 Ny dia faha telo
2.3.4 Ny dia faha efatra
Vitsy ny zavatra nosoratan'i Colomb fantatr' isika : taratasy, quittance, tsiahy tanatin'ny bokin'ny fitehirizam-bokiny ary sonia. Ny lahatsoratra hafa toy ny diarin'ny diany dia dika ary tsy fantatra raha tena izy na tsia ny tena nanoratra azy. Ny ankabeazan'ny soratr'i Colomb dia nadika tamin'ny fiteny frantsay.
Ny fahaizan'i Colomb olona manam-pahaizana dia miankina amina boky efatra anazy ary notehirizina. Roa arivo tsy latsaka ny isan'ny marika voasoratra tamin'ny sisim-pejy.
I Pierre Martyr d'Anghiera, filôzôfin' Italia avaratra dia nilaza tanatin'ny Orbo Novo -ny tamin'ny 1494 ny tenin'ny nanatri-mason'ny fahitany.
Tsy mazava ny toererana tena niterahan'i Colomb fa ankehitriny izy dia tenenina fa olona avy any Ligioria, eo manodidon'i Genes. Eken'ny fikambanan'ny tantarata io fihaviana avy any Genes io hatry ny faran'ny taonjato faha 19, tamin'ny 1892 raha marimarina kokoa ho an'ny fitsingerenana ny faha 400 taon'ny fahitany an' Amerika,. .
Pejy iray ao amin'ny bokin'i Marco Polo nosoratsoratan'i C. Colomb
Araka ny tantarata, i Christophe Colomb dia teraka tamin'ny 1451 tao amin'ny Repoblikan'i Genova. Ny rainy dia i Domenico Colomb ary ny reniny dia i Suzanna Fontanarossa. Any Calvi koa ny trano nahaterahan'i Colomb ; any Haute-Corse, tanàna Genovana tamin'izany fotoana izany. Ny zandriny dia Bartolomero Colomb sy Giacomo Colomb. Misy mpanoratra milaza fa olona jiosy voatery nivadika kristiana i Christophe Colomb - jereo ny Limpieza de sangre. Io hipôtezy io dia miankina amin'ny taratasy nosoratany misy soratra ebreo hita ao amin'ny fiteny ladino.
Nanana fianjadiana taminy ny Boky ny hagagan'ny tany nosoratan'ny andriana anglisy Jean de Mandeville teo anelanelan'ny taona 1355 sy 1357 (nandritry ny ady naharitra Zato Taona, tamin'izy avy any Azia Atsinanana, avy amin'ny zava-kitany sy ny tantaran'ny misionera frantsisikana sy dominikana. Nankany Ejipta, Palestina, India ary Sina i J. de Mandeville teo anelanelan'ny taona 1322 sy 1356 (efatra ambin'ny telopolo taona, fitaona lava be tamin'izany fotoana izany). Ny boky ny hagagan'ny tany (samihafa amin'ny Dian'i Marco Polo, notantarainy tany am-ponja) dia navoakan'ny sosaietia andrefana amin'ny fiteny maro. Na dia nisy mpanadiady nambara fa mpangala-tahaka (an'i Marco Polo) aza izy. Ny bokiny dia nanana fianjadiana lehibe tao Eoropa Andrefana.
Manana ny boky Imago mundi (nosoratan'i Pierre d'Ailly tamin'ny 1410) koa i Colomb, boky nosoratsoratany.
Asa tao amin'ny Fifamoivoizana an-dranomasinaHanova
Tamin'ny 1476, nihakatra tao amina sambo fitanteran'entana mankany Lisboa sy mankany Inglatera i Christophe Colomb. Fa voatafiky ny frantsay ilay sambo ary nandositra nankany amin'ny tanàna portogein'i Lagos izy ary aveo nankany amin'ny rahalahiny, mpanao sarin-tany any Lisboa.
Ny sarin-tan'ny Colomb mpirahalahy
Nanambady an'i Filipa Moniz, zana-bavin'i Bartolomeu Perestrelo, governora'i Porto Santo (izy no nahatomboka ny fanjanataniana portogey tamin'ny 1425) Andrianakely portogey. I Felipa dia maty afaka fotoana vitsivitsy taorian'ny nahaterahan'ny zanany lahy tokana : Diego Colomb, mety teraka tany ami'nny 1480 teo amin'ny nosin'i Porto Santo (Hanana zanaka lahy faharoa i Colomb amin'ny 1488, Fernand no anarany, mety nahaterahan'i Beatriz Enriquez de Arana). Mihamaranitra hatrany ny fahaizan'i Colomb amin'ny famoivoizana an-dranomasina, mety avy amin'ny sarin-tany nomen'ny vadiny tamin'ny fanambadiany angamba io ; ireo sarin-tany ireo, manoro ny rivotra sy ny fananan-tany portogey, dia mety an'i Bartolomeu Perestrelo.
Ny tetikasany : mandeha any India amin'ny alàlan'ny mankany andrefanaHanova
Ny dia voalohanyHanova
Ny dia faha roaHanova
Ny dia faha teloHanova
Ny dia faha efatraHanova
↑ ((fr)) Nanoratra i Pierre Chaunu : « Voyez le miracle Colomb. En moins de dix ans, les routes maritimes qui, trois siècles durant, assureront le meilleur des relations entre l'Europe et l'Amérique, sont à peu près définitivement fixées. » in Conquête et exploitation des nouveaux mondes, PUF, Nouvelle Clio, 1969, p. 267.
↑ (Heers 1991, p. 21-23)
↑ (Mahn-Lot 1960, p. 3-8)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Christophe_Colomb&oldid=768003"
Dernière modification le 18 Aprily 2015, à 08:08
Voaova farany tamin'ny 18 Aprily 2015 amin'ny 08:08 ity pejy ity.